Maxaa kaaga baxay safarkii Madaxweynaha Somalia ku tegay Garowe+Sawiro
Maxaa kaaga baxay safarkii Madaxweynaha Somalia ku tegay Garowe-Laba mise hal+Sawiro
29 April 2013 Waagacusub.com-Madaxweynaha Dawladda Federaalka Soomaaliya Hassan Garguurte ayaa ka degay Magaalada Garoowe ee Saldhiga u ah Maamul Goboleedka Puntland, Soo dhoweynta Madaxweynaha Soomaaliya sida ay u dhacday maxaa kaaga Baxay, qodobada hoos ku qoran ee uu samaynayo Maamulka Puntland Ma federaal Baa ?!!!. 1- Garoonka Magaalada Garoowe ee Madaxweynaha Soomaaliya ka degay waxaa laga Taagay Labo Calan oo siman, Mid uu yahay Calanka Dawladda Soomaaliya midna uu yahay Calanka Maamul Goboleedka Puntland, Labada Calan ee sidaa ah waxaa lagu soo dhoweeyaa Marka Madaxweyne Qaran uu tago, Dal kale oo Xiriir ka dhexeeyo. Arrinta Noocaan ah Federaal malagu Tilmaami karaa?!!!
2- Madaxweynaha Soomaaliya Hassan Culusow oo uu garab taagan yahay Madaxweynaha Maamulka Puntland waxaa loo tumay heesta Calanka Soomaaliya, soo dhoweynta Madaxweyne loo tumayo hees Qaran caadiyan waxaa la sameeyaa marka madaxweyne uu ka dego dal ay xiriir leeyihiin, sidoo kale Madaxweynaha Soomaaliya iyo Madaxweynaha Maamulka Puntland waxaa qoorta loo suray Fiyoorayaal lagu muujinayo inay yihiin Labo Madaxweyne oo siman. Arrinta Noocaan ah Federaal malagu Tilmaami karaa?!!!
3- Madaxweynaha Dawladda Soomaaliya waxaa loo diyaariyey shir Jaraaid oo ay si wadajir ah u qabanayaan Madaxweynaha Maamulka Puntland, shirka Jaraaid waxaa hadalka bilaabay Cabdirahmaan Faroole isaga oo ku hadlay waxyaalo aysan ogeyn Dawladda Soomaaliya oo uu ku durayo Dawladda Soomaaliya. Caadiyan Caalamka kama dhacdo Madaxweyne Dalkiisii gobol kamid ah tegay ee Maamulkii Gobolkaa uu si la siman Madaxweynaha Soomaaliya u hadlayo oo uu weliba ku hadlayo dhaliil uu u jeedinayo Dawladda Soomaaliya!! Arinta noocaas ahi ma lagu tilmaami karaa Federaal?
4- Maamulka Puntland oo Cabdirahmaan Faroole hogaamiyo wuxuu samaystay Dastuur, Dastuurkaas oo aan dawladda Soomaaliya waxba ka ogeyn, Dastuur aan muujinayn waxa Soomaaliya kala dhexeeya marka laga reebo in Puntland ka mid tahay Federaalka Soomaaliya, Dastuurkaas wuxuu sheegayaa in Puntland yeelanayso Baarlamaan, Xukuumad, Madaxweyne, In Puntland Yeelanayso Garsoor ilaa Maxkamad Sare, In Puntland kheyraadkeeda u madax banaan tahay Caalamkana kala heshiinayso, In Puntland Ciidan yeelanayso xuduudaheeda ilaaliya, in Puntland heshiis Maxaabiista iyo danbiilayaasha la isku gudbinayo la yeelanayso Dawladaha Deriska la ah, In Puntland yeelanayso Baanki dhexe, samaysanaysana Lacag Marka loo Baahdo, Ma jirto wax muujinaya xiriirka Puntland kala dhaxaynaya Dawladda Soomaaliya. Arrimaha Noocaan ah Federaal malagu Tilmaami karaa?!!!
5- Dastuurka Puntland wuxuu sheegayaa in Dadka Puntland ee xuquuqda leh ay yihiin Puntlandiis, Taas oo loola jeedo Majeerteen, Dishiishle, Dhulbahante, Leelkase, Awrtable iyo Warsengeli, Dadka kale ee Soomaaliyeed ee ku nool Goboladda Puntland wax xuquuq ah kuma laha ay qeyb kaga noqon karaan laamaha Maamulka ee Puntland, Dadka Soomaaliyeed ee ku nool Boosaaso , Garoowe ilaa qeybta Waqooyi Gaalkacyo waxaa loola dhaqmaa sida Qaxootiga. Arrinta Noocaan ah Ma lagu tilmaami karaa Federaal?!!
6- Dastuurka Puntland waxaa ku qoran Dastuurka Puntland waxaa wax laga bedeli karaa oo Kaliya Marka Dawladda Federaalka Soomaaliya ay yeelato Dastuur shacabka Soomaaliyeed u codeyso, inta ka horeyso Puntland wax ka quseeya Soomaaliya ma jiraan marka laga reebo Xildhibaanada ku jira Baarlamaanka, Xubnaha kala duwan ee Laamaha Dawladda Ku jira, Safiiradda , qunsulada iyo Shaqaalaha Safaaradaha oo Dawladda dhexe ka mid ah, Xubnahaan oo dhamaan ay tahay in Dawladda Dhexe ay mushaarka ka siiso Dhaqaalaha yar ee kasoo xarooda Dekedda iyo Garoonka Diyaaradaha Muqdisho. Arrinta Noocaan ah ma tahay Federaal?!!
7- Gobolada uu gacanta ku haayo Maamulka Puntland qofka Soomaaliga ah ee degan kasoo bilaabato Magaalada Gaalkacyo ilaa Xuduuda Kenya haddii uu tago Gobolada Puntland wax xuquuq ah kuma yeelanayo sida inuu ka mid noqon karo Laamaha Maamulka Puntland, inuu ka shaqeyn karo Hay’addaha kala duwan ee UN-ka iyo NGO-yada Caalamiga ah, mar haddii uusan ahay qabiilada gaarka ah ee uu xuquuqda siinayo Maamulka iyo Dastuurka Puntland, Halka qofka Kasoo jeeda Qabaailka isku yaqaana inay Puntlandiiska yihiin uu xuquuq Soomaalinimo yeelanayo, xuquuqaha inuu laamaha Dawladda ka mid noqdo, Inuu Hay''adaha Caalamiga UN-ka iyo NGO-ga uu ka shaqeeyo, Gobolada Qaar sida Jubooyinka ayba doonayaan inay Maamul u dhisaan, madaxna ka noqdaan, Qofka Soomaaliga ah ee degan Gaalkacyo Koofur, Galgaduud, Hiiraan, Sh/dhexe, Banaadir, Sh/hoose, Bay, Bakool, Jubada dhexe, Gedo iyo Jubadda Hoose hadii uu tago Boosaaso ama Garoowe wax xuquuq ah oo shaqo ama inuu muwaadin yahay ma yeelanayo, Halka qofka Puntland kasoo jeeda uu doonayo Hadii uu yimaado Koofurta Soomaaliya sida Kismaayo iyo Gobolada kalaba uu doonayo inuu xuquuq la mid ah midka dadka degan Koofurta Soomaaliya uu yeesho!! . Arrinta Noocaas ah ma loogu yeeri karaa Federaal?!!!
Miyaan la gaarin xiligii ay ahayd in Baarlamanka Soomaaliya shaqeeyo, Dastuurka Saxo, Soomaaliduna isku sheegi lahayd runta, dadka Soomaaliyedna laga dhigi lahaa dad siman oo ah qaran jira oo shaqeynaya federaal ama dawlad dhexe miduu rababa ha ahaadee, dadka ka shaqeynaya in Soomaaliya magac ahaan u jirto balse aysan shaqeyna laga hor yimaado, dadka Soomaaliyeedna inuu dalkiisa dhexdiisa qaxooti ku noqdo iyada oo qarsoon si toos ah looga hor yimaado.
Miyaan la gaarin xiligii dawladda iyo shacabka Soomaaliyeedba ay dhexdooda iska sixi lahaayeen oo aysan ku meereysanin dawlado ayaa Faragelin nagu haya, dawladda Soomaaliyeedna ay xilkeeda gudato.
Maxaa diidaya in Soomaaliya haddii ay Federaal doonayso in 18-ka Gobol uu gobol kastaa doorto Gudoomiyihii Gobolka, Gole degaan doorto, dadkuna is maamulaan, Dawladda dhexe-na ay Dalka dhan u dhaxayso, Dalka xisbiyo laga hirgeliyo madaxda iyo Baarlamaanka Dalka la doorto. Halkaan ka Daawo Warbixino xaqiiqa noqday.